Orinasa mpanohana ny takonana - Mpanamboatra mpanohana mpanafika any Shina, Mpanamboatra, mpamatsy
Namboarina tamin'ny neoprene matevina 100%, ny endrika volonika velariny mifanaraka amin'ny haben'ny valahany hatramin'ny 46 santimetatra, mahazo aina hita maso ary hita maso eo ambanin'ny fahatrarana. Manampy amin'ny fanamafisana ny vatanao handoro kaloria betsaka kokoa izy io ary hampihena ny lanjan'ny rano amin'ity faritra ity ary mety miaina ihany koa. Tsy toy ny fehin-kibo vita amin'ny fehikibo hafa, ity fehikibo ity dia manana paosy, koa azonao atao ny mametraka ny telefaona finday, vola, fanalahidy, carte de crédit ary zavatra hafa eo am-paosinao rehefa manao fanatanjahan-tena.
Ny kesika fanohanana dimy dia manatsara ny fanohanana ny valahany ary manome fiarovana tsara, lamba marefo sy mahazo aina no mahazo aina amin'ny hoditra. Lanja maivana ary mora ny hitafy ao anatiny sy ivelany. Ny fehin-kibo avo roa heny dia afaka manampy anao hanitsy ny fahatapahana ary mampitombo ny fanamboarana ny valahany. Mampihena ny fanaintainanao havanana ary mihazona mahitsy ny valahanao, mety amin'ny vanim-potoana rehetra.
Fanohanana ny andilana
Mamela ny hetsika feno mandritra ny fanomezana fanohanana mahafinaritra. Ny fehin-kibo fanolanana roa dia manome làlana sy fanenomana mahazatra. Ny tontolon'ny lamba dia mamoaka hafanana sy hamandoana be loatra. Namboarina ho mety tsara mba hanamaivana ny fihenan-torimaso sy ny famonosana. Ny mazoto mahasalama dia mitondra rivotra mangatsiaka ary manome hafanana anao, manafaingana ny fampidiran-dra mba hampiroborobo ny metabolism.
Maivana, malefaka, malefaka sady mizaha rivotra ny mpanamory ny andilana. Afaka manampy anao hamorona curve tonga lafatra. Fanatanjahan-tena mandritra ny folo minitra amin'ity lohasaha fehikibo ity dia hahatonga anao ho hatsembohana. Fehikibo fehikibo avo lenta azo antoka dia manome antoka anao ny fahatapahana tsara ary mety miaina ihany koa. Mifanaraka tsara ny vatanao ary mampiseho endrika tsara amin'ny vatanao. Lava sy loko maro karazana dia azo ekena ihany koa ny OEM.
Ny endrika manokana ataonay, ny coating ion coating, izay ampiasaina hanangona hafanana rehefa mitafy, nefa mbola mifoka rivotra sy mahazo aina ary manome anao fahatomombana sy hatsembohana tsara kokoa raha oharina amin'ireo karazana fehikibo hoditra famaohana hatsembohana, noho izany dia afaka mamolavola ny vatanao amin'ny fotoana fohy kokoa. . Maivana sy mahazo aina ny fitaovana, tsy ho enta-mavesatra izany rehefa manao fanatanjahan-tena.